How to Start a Successful Business That Run Itself in 10 Steps - Sicko News
Ma waxaad dooneysaa inaad yeelato meherad iskiis u shaqeysa oo ku siinaysa wakhti bilaash ah? Hadday HAA tahay, halkan waxaa ku yaal hage dhameystiran oo ku saabsan sida loo bilaabayo ganacsi guuleysta oo isagu iskiis u maamulo.
Farxadda ganacsatada badankood waa in ay bilaabaan ganacsi ku shaqeynaya wadida duuliyaha oo weli kacsi aad u weeyn ku socdo – in ka badan bil kasta oo aan walwal iyo walaac midna lahayn. Baadhitaan la sameeyay ayaa muujinaya in inta badan ganacsiyada leh saldhig adag, ay yihiin kuwo aad u faa iido badan isla markaana si guul leh u cirib tiri kara biilalka oo dhan sida ay ula noolaan karaan ama aan lahayn milkiilaha ganacsiga.
Maxaa loo dhisi karaa Ganacsi iskiis u orda?
Waa run in mararka qaarkood ay runtii culeys ku noqon karto qof ganacsade ah markii aad ku lugleedahay dhammaan howlaha ganacsigaaga; laga soo iibsado alaabada ceyriinka ah, waxsoosaarka iyo ugu dambeyntii gaarsiinta alaabada / alaabada macaamiishaada. Haddii aad wali kujirtid qaybtaan hawleed, waxaa laga yaabaa inaad si fudud u gubto. Tani waa iska cadahay ma ahan waxaad u rabto milkiile ganacsi; ka sokow taasi uma fiicna caafimaadkaaga, nolosha bulshada iyo nolosha qoyskaaga.
Ma ogeyd inaad noqon karto qof ganacsade ah welina aad haysato waqti ku filan oo aad ku tagto fasax, aad u tagto qoyskaaga, nolosha shaqsiyeed iyo mid diimeed, ciyaar golf ama ciyaar kasta oo aad doorato? Furaha ayaa ah inaad awood u yeelatid inaad meel dhigto qaabab kaa caawin kara meheraddaada inay ku sii wadato duuliyaha.
Waa inaad sidoo kale ka fiirsataa waxa laga bilaabo maalinta aad maskaxda ku hayso inaad ganacsi bilowdo waana inay qayb ka ahaataa qorshahaaga ganacsi. Haddaba aan si dhakhso leh uga fikirno 10 talooyin ee xoogga leh kuwaas oo ka caawin kara ganacsade kasta inuu bilaabo ganacsi naftiisa maamula:
Sida loo Bilaabo Ganacsi Guul Ku Socota Isaga Oo Ku Soconaya 10 Talaabo
1. Awood u yeelo sameynta Meherad ku Sareysa Gawaarida – Maskaxda Qorshaaga Ganacsiga
Haddii aad runtii rabto inaad bilowdo ganacsi ku socda wadida duuliyaha, markaa waa inaad si taxaddar leh uga hadashaa wixii bilowga ah. Waa muhiim inaad si cad ugu qeexdo qorshahaaga ganacsi si aadan waxyaabaha u dhicin. Sameynta tani waxay ka dhigan tahay inaad leedahay hage kuu adeegi doona adiga iyo inta ka hartay kooxdaada ganacsi ama la-hawlgalayaasha.
2. Shaqaale Tartan iyo Shaqaale Aamin Ah
Dabcan haddii aad rabto inaad biloowdo ganacsi iskiis u socda, markaa ma aha inaadan ahayn qofka keliya ee socodsiinaya meheradda. Tani waxay ka dhigan tahay in lagaa doonayo inaad shaqaaleysiiso xubnaha kale ee kooxdaada. Marka, waxa aad u baahan tahay inaad sameyso markii aad shaqaaleysiinayso shaqaalaha waa inaad raadiso dadka ku shaqeyn kara kormeer yar ama aan lahayn, iyo kuwa lagu kalsoonaan karo oo si fudud laguugu kalsoonaan karo. Sababahan dartood, waa inaad ku soo dartaa su’aalaha jimicsiga baarista kaa caawin kara inaad garato astaamahan.
3. Diiwaangali dhamaan waxqabadka ganacsigaaga
Aad ayey muhiim u tahay in adiga iyo kooxdaadu diiwaan gelisaan dhammaan howlaha ku saabsan socodsiinta ganacsigaaga maalin kasta. Tani waa inta ugu badan macluumaadka loo baahan yahay si loo dhiso habraacyada hawlgalka ee caadiga ah (S.O.P) ee ganacsiyada.
4. Samee Habsocodyo Howleedyo Caadi ah (S.O. P)
Nidaamyada Hawlaha Heerka ah (S.O.P) waa geedi socodyo awood u siiya urur inuu ku ordo matoorka isla markaana uu wali soo saaro badeecado ama adeegyo isku mid ah oo tayo sare leh. Runtu waxay tahay haddii aadan dooneynin in tayada badeecadaada iyo adeegyadaadu ay is beddelaan, markaa waa inaad ganacsigaaga ku socodsiisaa Nidaamyada Hawlqabadka. Markaad haysato meesha S.O.P, shaqaale kasta ayaa buuxin kara – shaqaale kale oo maqan oo wali soo saara alaabo ama adeegyo isku tayo ah oo ururka lagu yaqaan.
5. Si Joogto Ah U Saar Himiladaada Shaqaalahaaga
Qayb ka mid ah waxa aad u baahan tahay inaad sameyso si aad ugu guuleysato meherad si guul leh u maamuli karta lafteeda waa inaad si joogto ah uga iibiso himiladaada kooxdaada iyo shaqaalahaaga. Waa macquul in laga iibiyo aragti aragti koox dad ah waxayna horay usocdaan inay kaa caawiyaan fulinta himilada. Tani waa dhab ahaan waxa ay tahay inaad ku dadaasho inaad sameyso. U sheeg shaqaalahaaga aragtidaada shirkada inta lagu jiro kulamada kooxdaada, sidoo kale hubso inaad ku daabacdo aragtida kaarboor isla markaana aad dhigtid meelo istiraatiiji ah xafiiskaaga.
6. Tababbarka joogtada ah ee shaqaalahaaga
Waa inaad ku bixisaa ahmiyad dheeraad ah tababarka shaqaalahaaga haddii aad rabto inaad dhisto ganacsi iskiis u socodsiin kara. Runtu waxay tahay in markii shaqaalahaaga si fiican loo tababarayo, ay si guul leh ugu gudbi karaan howlahaaga ganacsi adoo aan lahayn fikradaada. Haddii aad rabto dad karti leh, markaa waa inaad maal gasho tababarka iyo qalabeynta.
7. Fududee Howlaha Ganacsigaaga
Si guul leh loogu dhiso meherad si iskiis ah ugu ordaya, waxay ka dhigan tahay inaad waxkasta oo ay qaadanayso u fududeyso hawlaha la xiriira ganacsiga. Himiladaadu waa in lagu habeeyaa had iyo jeer raadinta dariiqooyin sahlan oo lagu qabto waxyaabaha ka jira ururkaaga. Runtu waxay tahay markii habka socodsiinta meheraddaadu u fududaan tahay, waxay badbaadin doontaa shaqaalahaaga walbahaarka waxayna dhab ahaan kordhin doontaa wax soo saarka.
8. Awoodda Abaalmarinta
Arrin kale oo muhiim ah oo kaa caawin kara inaad dhisto ganacsi oo maamuli kara la’aan joogitaankaaga ayaa ah inaad abuurto qalab dhiirrigeliya shaqaale karti leh
how to How to Start a Successful Business How to Start a Successful Business That Run Itself How to Start a Successful Business That Run Itself in 10 Steps How to Start a Successful Business That Run Itself in the 10 steps